Indlela yokuqonda ukuma okanye ukuwa kwezinto zokusebenza zokuhlamba
Indlela yokuqonda ukuma okanye ukuwa kwezinto zokuhlamba iimpahla? Kule nkalo enkulu yobutyebi bemveliso, iimveliso ezahlukahlukeneyo zoomatshini wokuhlamba ziyi-lang lang zibona yonke indawo, umgangatho omuhle kunye nokubi zidibanisa. Ngako-ke, ukuba utyalo-mali oluzayo olucoca ukucoca i-shishini, kufuneka njani ukuqonda ukuma okanye ukuwa kwempahla yokuhlamba?
Uhambo lwentsimi. I-alchaism ifu: ukuphulaphula izandi ezibonakalayo, ukubona kukukholelwa. Abatyalomali ngaphambi kokuthenga izixhobo, abavelisi bezixhobo zokuhlamba banokufikelela kwindawo yokuqala yokusebenza kwintsimi, jonga umenzi wemveliso yemveliso, izixhobo zokusebenza, iinkonzo kunye nokunye, ufeze kakuhle kakuhle.
Okwesibini, ukuhlolwa kwimihlaba. Abatyalomali banokucela ukuba bahlaziye iimveliso zokuvavanya, ukusebenza kakuhle kwezixhobo zivame ukuba yingxolo encinane xa kusetyenziswa, i-jitter ephantsi.
Zintathu, izixhobo zokujonga izinto zokusebenza. Izinto eziphathekayo ezingenasici zinokuthi zikhusele ngokufanelekileyo izixhobo zokuhlamba i-rust, zandise ubomi benkonzo.
Okwesine, qonda i-report inspection inspection. Abavelisi abaqhelekileyo abasesikweni, ukuhlolwa kweempahla zokuhlamba eziqinisekileyo ezifanelekileyo ezifanelekileyo, zixhobo kuphela zixhobo, abatyali-mali bayakuzama ukuqinisekiswa ukuthenga.
Ukuqokelela, ukuqonda ukuma okanye ukuwa kwezinto zokuhlanza iimpahla ngokwenene ngumsebenzi onzima kakhulu, abatyali-mali kufuneka bahlambe amehlo, bakhethe umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi loomatshini bokuhlamba.
Inqaku lokugqibela: Yiyiphi i-brand of cleaners cl...
Inqaku elilandelayo: No.